Wholesale Tsika Yong Raw Edge Raglan Sleeve Colorblock T-shirt vagadziri uye vatengesi | Yiwan
Tsika Yong Raw Edge Raglan Sleeve Colorblock T-shirt
Colorblock t-shirt ruzivo:
Item Name Tsika varume vechidiki mbishi kumucheto raglan sleeve colorblock t-shirts ComposItion Cotton
Logo Kudhinda, kumembroidery… Yakagadzirirwa Size XS-XL, kuwedzera saizi iripo
Sampling Nguva 6-8 mazuva ekushanda mushure mekusimbisa zvese zvese MOQ 100pcs pamhando imwe ruvara
Yiwan Apparel Co., Ltd yakatanga kubva kuchikwata chidiki uye ikozvino ichikura kuita kambani yembatya ine kugona kuzvigadzira yega yekudzora mutengo uye kubatsira nevatengi kugadzira madhizaini matsva anoshanda zvakanyanya.
Nyanzvi mune varume causal kupfeka, t-shirts, hoodie & sweatshirts, zvikabudura & bhurugwa, ect. Uye gamuchira magadzirirwo echinyakare ane yakaderera MOQ 100pcs pamaitiro erudzi.
Iine 30,00 Square metres. Pamusoro pe100 vanhu. Inowanikwa muDongguan, China, inova nzvimbo yeindasitiri yembatya yakavharwa kune machira makuru uye misika yemidziyo, iyo inochinjika kune yazvino fashoni zvinhu.
uye zvinhu zvinokurumidza kusvika. yakavharwa kuShenzhen neGuangzhou ports zviri nyore uye zvinokurumidza kutumira.
WIth jira rekuongorora muchina uye pre-shrinkage muchina wekuchengeta jira rakanaka kugadzira kudzivirira kukanganisa machira.
Evashandi vane ruzivo vanoshanda nesimba kuti vatore sampling zvinobudirira.
7 mitsetse yekugadzira kuvimbisa kukurumidza nguva kutenderera.
Adhipatimendi redhipatimendi redhipatimendi uye nyanzvi QC dhipatimendi rekunyatso kudzora mhando uye zvigadzirwa zvakakwana.
YOung inofarira uye inyanzvi yekutengesa timu yekupindura panguva yakakodzera kuti ikurumidze kutaurirana pamusoro pekutanga-kutengesa, kutengesa uye mushure mekutengesa.
Isu takakomba pane yega yega odha, tarisa pane yega nhanho, ine mutoro kune yega yega chikamu uye tinoshanda pamwechete kuita kuti zvinhu zvive zvakakwana uye zvinobudirira.
Kana iwe uchifarira chimwe chezvinhu zvedu kana uchida kukurukura tsika yekuraira, ita shuwa kuti unonzwa wakasununguka kutibata nesu. Isu tanga tichitarisira kuumba hukama hwebhizinesi hwakabudirira nevatengi vatsva pasi rese munguva pfupi iri kutevera.
1.Yakavharwa kune machira uye musika wemidziyo, inochinjika pamafashoni emafashoni uye nekutsvaga zvinhu
2.Yakavharwa kuShenzhen neGuangzhou ports, zviri nyore kukurumidza kutumira.
3.Skilled vashandi vane ruzivo vanoita kuti nzira iende zvakanyanya.
4.Professional murwere wekutengesa timu yekukurukurirana kwakanaka
5.Custom service inosanganisira kudhinda, embroidery, embossing, chenille...ect
Q2: Ndinogona kuita zviyero zvetsika?
A2: Ehe, zvinogoneka. Uye isu tinogona zvakare kukuratidza saizi referensi.
Q3: Ndeapi mazwi ako ekubhadhara?
A3: T/T, Mari giremu, 40% dhipoziti pachine nguva, 60% chiyero pamberi zvakawanda Shipment
Zvakapfuura: Custom Brand Varume VeCotton Marefu Akareba Piqué Polo Shirts
Zvinotevera: Chipfuva Chevanhurume Homwe YeSleeve Kapfupi Cotton Jersey Polo Shirt
varume colorblock t-shirt
T Shirt Yemavara maviri
Classic Men's Two-tone Long Sleeve Raglan...
Chic Raglan Sleeve T-shirt Varume Marefu Sleeve Base...
Tsika Ribbed Crewneck Cotton Jersey Boxy T-shirts